Degso AVG AntiVirus Free 2021 loogu talagalay Windows
Degso AVG AntiVirus Free 2021
Degso AVG AntiVirus Free 2021,
AVG AntiVirus Free waxaa halkaan ku yaal nooc cusub oo qaadaya boos yar isla markaana yareynaya isticmaalka xusuusta marka loo barbar dhigo noocii hore. Isku darista sheegashada ee dhakhsaha iskaanka oo leh waxqabad wanaagsan, softiweerku wuxuu la yimaadaa isbeddelo muhiim ah oo ku saabsan qaabeynta isdhexgalka oo leh nooca 2020.
Barnaamijka waxaa loo sameeyay in lagu aqoonsado barnaamijka antivirus been abuurka ah. Gaar ahaan waxay ku habboon tahay dadka internetka kaliya adeegsada ee adeegsada adeegyada isku-xirka bulshada, AVG AntiVirus Free wuxuu ka mid ahaa barnaamijyada antivirus-ka hormuudka ka ah warshadan sannado badan. Barnaamijkan, oo bixiya difaac dhammaystiran oo leh qaab-dhismeedkiisa awood badan oo si joogto ah loo cusbooneysiiyo, waxaa adeegsada malaayiin qof oo adduunka ah. AVG AntiVirus Free ayaa had iyo jeer fiiriya hanjabaadaha cusub iyada oo la cusbooneysiin joogto ah oo ay ku shaqeyneyso xisaabinta daruurta iyo shabakadda ilaalinta bulshada.
Iyadoo la cusbooneysiinayo keydka fayraska, AVG AntiVirus Free ayaa had iyo jeer diyaar u ah hanjabaadihii ugu dambeeyay, iyadoo la siinayo difaac heer sare ah. Software-kan, oo ku siinaya adiga heerka ugu sarreeya ee ilaalin bilaash ah oo leh xulashooyin sida gaashaan la dhisay, muuqaalka anti-spyware ee ka dhanka ah spyware, iskaanka emaylka, ku darida amniga, dalbashada ama isbaarada tooska ah iyo baaritaanada, waxay bixisaa hawlgal hufan oo hufan iyadoo aan laga gaabinaynin waxqabadka kumbuyuutarkaaga habka ay ku shaqeyn karto.
Sidee loo rakibaa fayraska AVG Antivirus?
Waxaan isku daynay inaan sharaxaad ka bixinno sida loogu rakibo AVG, mid ka mid ah barnaamijyada antivirus-ka adduunka ee aadka loo isticmaalo, kombiyuutarka fiidiyowga hoos ku qoran.
Astaamaha Antivirus ee AVG
Nidaamka ka-qaadista iyo ka-hortagga fayraska ee ku guuleystay abaalmarinta
Baadhitaan dhakhso badan oo xikmad badan
Koontaroolada asturnaanta ee horumarsan
Wuxuu ogaadaa oo joojiyaa fayrasyada, hanjabaadaha iyo kharribaadda
Wuxuu joojiyaa isku xirnaanta iyo feylasha aan aaminka ahayn
Ilaalinta mobilada oo lacag laaan ah
Waxay ka hortagtaa basaasnimada iyo xatooyada xogta
Ka tagi mayso raadad faylalkaagii la tirtiray
Waxay kaa caawineysaa inaad feylashaada qarsoodiga ah aamin noqoto
Waxay ka caawisaa kumbuyuutarka inuu xawaare ku socdo
Talooyin iyo digniinno si fudud loo adeegsado
Isbedelada ka yimaada Cusboonaysiinta ka hortagga fayraska ee AVG 20.10.3157
Ilaalinta Sirta La Sii Dheereeyay - Hadda waxaan sidoo kale ku ilaalinaa furahaaga sirta ah noocyada beta ee daalacashada. (Chrome, Edge, Firefox iyo Browser AVG oo Sugan - Noocyada Lacagta Kaliya)
Dib u soo kabashada Disk Disk - Windows 7 isticmaalayaashu way u dabaaldegi karaan iyagoo ogaanaya in muuqaalkani mar kale u shaqeynayo iyaga, waxaanan horumarinnay waxqabadkiisa waxaanan hubinay inay si habboon u nadiifinayaan .DLLs khuseeya dhammaan isticmaaleyaasha.
Maxaa Kucusub Cusboonaysiinta Bilaashka ah ee AVG 20.9.3152
Qabashada CyberCapture - Ma seegtay ogeysiis? Hadda waxaad arki kartaa dhammaan natiijooyinka feylasha laga shakiyo ee aad u gudbisay shaybaarradeena Hanjabaadda ee ku yaal xarunta ogeysiiskaaga
Badbaadinta ereyga isku-dhafan - Marka laga soo tago Chrome iyo Opera, hadda waad sir-ilaalin kartaa Microsoft Edge iyo kan aan jecel nahay, Avast Secure Browser.
Waxqabadka hagaajinta - Qaybahaaga fayraska ayaa hadda xawli dheeri ah ku shubi doona iyada oo ay ugu wacan tahay rarka isku mar ee adeeggayaga iyo VPS.
Aamusnaan ayuu ku socdaa asalka
Cusbooneysiin joogto ah iyo otomaatig ah
Ilaalinta shabakada bulshada
Dhammaan astaamaha ku jira nooca pro-ka ayaa maqan
AVG AntiVirus Free 2021 Noocyada
Horumar: AVG Technologies